Parent Message December 16 – Mandalay International Science Academy
December 16, 2020 Wai Yan
This Friday is the last day of school before the winter break. Classes will resume on Tuesday, January 5. The half-term Parent Teacher Conference will take place after the break, in early February.
For the last week we want students to have fun, so we have arrangeda‘Spirit Week’, meaning children can dress up for their classes. Tuesday was ‘Hat Day’, followed by Wacky Wednesday, Class Colours Thursday andaWinter Wonderland theme on Friday. For details, please contact the respective homeroom or assistant teacher.
We encourage all students to maintainasense of routine during this lockdown period, which means not going to bed late, getting up early, and washing and getting dressed every day as if it wereanormal day.
In other news, we are happy to inform all parents that we will soon be offering A-levels at MISA. Classes will commence in January, and will move to our new campus once it is ready. Courses on offer are Mathematics, Business, Economics, ICT and Physics, as well as English for academic purposes. For more details, please contact the school.
In case you haven’t heard, MISA is now alsoacertified Cambridge PDQ centre. That means we are able to train teachers for completion of official Cambridge professional development qualifications. The first group of teachers is currently completing the Certificate in Teaching and Learning under the tutelage of our Head of Academics, Mr Kyaw Moe Aung, and the mentorship of some our more experienced teachers. This isagreat opportunity for our teachers to receive professional development training, and our hope is that, by extension, our students will benefit greatly as well. In future, our assistant teachers will be able to take part in the training course.
As always, we value your feedback, and would be grateful if you could take5minutes to fill out this survey, in the interests of providing the best possible service to our students.
We wish all families celebrating Christmasapeaceful time with their families and hope and pray that you all haveahappy and successful year ahead!
ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၂၀
လာမည့်သောကြာနေ့သည် ဆောင်းရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်မတိုင်မီ နောက်ဆုံး စာသင်ရက်ဖြစ်ပါသည်။ ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် ကျောင်းပြန်ဖွင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စာသင်နှစ်ဝက်အတွက် မိဘဆရာ အစည်းအဝေးကို ကျောင်းပိတ်ရက် အပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ အစောပိုင်းတွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုနှစ် ၂၀၂၀၏ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် ကလေးများ ပျော်ရွှင်စေရန်အတွက် Spirit Week ကိုစီစဉ်ထားပါသည်။ အင်္ဂါနေ့တွင် Hat Day ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Wacky Wednesday ၊ ကြသပတေးနေ့တွင် Class Colours နှင့် သောကြာနေ့တွင် Winter Wonderland တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများအတွက် ရယ်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်စေမည့် ဝတ်စုံများကို သတ်မှတ်ရက်အလိုက် ဝတ်ဆင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့သိရှိလိုသည်များကို သက်ဆိုင်ရာ အတန်းပိုင် ဆရာ၊ ဆရာမ သို့မဟုတ် assistant teacher များကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ယခုလို သွားလာခွင့် ကန့်သတ်ထားသော အားလပ်ရက် ကာလအတွင်းတွင်လည်း ကျောင်းသားကျောင်းသူများ နိစ္စဓူဝ လုပ်နေကျဖြစ်သော အိပ်ယာစောစောဝင်ခြင်း၊ ခြေလက်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း၊ အင်္ကျီအဝတ်အစားလဲခြင်း စသည်တို့ကို ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက် ဆောင်စေလိုပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ MISA ကျောင်းတွင် A-Level အတန်းများကိုမကြာမီ စတင်သင်ကြားပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ အသိပေးလိုပါသည်။ ဇန်နဝါရီလတွင် အတန်းများစတင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းဆောင် အသစ်ပြီးစီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် အတန်းများကို ရွှေ့ပြောင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်ကြားပေးမည့် ဘာသာရပ်များမှာ သင်္ချာ၊ စီးပွားရေးပညာ၊ဘောဂဗေဒ၊ အချက်အလက်နှင့်နည်းပညာ ICT နှင့် ရုပဗေဒ ဘာသာရပ်တို့ဖြစ်ပြီး English for Academic Purposes ပညာရေးဆိုင်ရာအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ကိုလည်း ဖြည့်စွက်သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ကျောင်းသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
MISA ကျောင်းအား Cambridge ၏ ဆရာဆရာမများ အရည်အသွေး တိုးတက်မြင့်မားစေရေး သင်တန်းစင်တာ Cambridge PDQ Centre အဖြစ် တိုးမြှင့် အသိအမှတ်ပြုထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ထပ်ဆောင်း အသိပေးလိုပါသည်။ ယင်းအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအနေဖြင့် ဆရာဆရာမများအတွက် Cambridge professional development qualifications များ အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေမည့် ဆရာဖြစ်သင်တန်းများကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခွင့်ရရှိပြီဖြစ်ပါသည်။ MISA ကျောင်း၏ Head of Academics ဖြစ်သူ ဦးကျော်မိုးအောင် က ဦးဆောင်ကာ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း၊ အခြား ဝါရင့် ဆရာဆရာမများက mentor အဖြစ် ဆရာတစ်ဦးချင်းအား အနီးကပ် လမ်းညွှန်ပြသ ဆွေးနွေးပေးခြင်းတို့ဖြင့် Certificate in Teaching and Learning သင်တန်းအား ပထမဆုံး သင်တန်းအဖြစ် သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေလျက် ရှိကြောင်း အသိပေးလိုပါသည်။
ဤသို့ ဆရာဖြစ်သင်တန်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရခြင်းသည် ဆရာ၊ ဆရာမများ၏သင်ကြားရေးအရည်အသွေးတိုးမြှင့်စေမည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း ဖြစ်ပြီး တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအတွက်လည်း လွန်စွာအကျိုးရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကျွန်တော်တို့၏ assistant teachers များသည်လည်း ဤ သင်တန်းများကို တက်ရောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များကို အမြဲအလေးထားကာ ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ်လျက် survey စစ်တမ်းတစ်ခု ကောက်ယူလိုပါသည်။
၅ မိနစ်မျှ အချိန်ပေး၍ ယခု survey စစ်တမ်းအား ဖြည့်ပေးကြမည့်အတွက် မိဘများအား အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြမည့် မိသားစုများအားလုံး မိမိတို့မိသားစုများနှင့် အတူ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ကျင်းပနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော ငြိမ်းချမ်းမှုအောင်မြင်မှုများနှင့်ပြည့်စုံသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုပါသည်။
Greetings from the MISA administration team